‘त्यो पापीले ‘हिरोनी’ जस्ती छोरीलाई यस्तो पारिदियो’ – Jaljala Online
‘त्यो पापीले ‘हिरोनी’ जस्ती छोरीलाई यस्तो पारिदियो’
Posted on May 21, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
जेठ ७, काठमाडौँ । ‘एक्लो छु, चौकीमा धाउँ कि अस्पतालमा छोरी कुरुँ !’ सलको सप्कोले अनुहार पुछ्दै कमला खड्का भनिन्, ‘ के गरिरा’छु, के बोलिरा’छु, आफैंलाई याद छैन । अस्पतालमा बिल पनि सात्तो जाने उड्दो रै’छ ।’
अनुहार निराश छ । आखाँमा टिलपिल आँशु । घरी यता घरी उता गरिरहन्छिन् । टेबल राखेका औषधिहरुमा हात चलमलाइरहेको छ । अस्वाभाविक रुपमा सलको सप्कोले मुहार पुछिरहन्छिन् । हातमा रहेको सानो ‘टुकटुके फोन’ (उनकै शब्दमा) मा बजिरहन्छ । फोनमा एक मिनेटजति बोलेपछि टेबलमा रहेको पानी घुट्क्याउँछिन् । पानीको बोतल टेबलमा राख्दै भन्छिन्, ‘ यिनै छोरीहरुको लागि भनेर कत्ति दु: ख गरेँ । खाइ नखाई अर्काको घरमा भाँडा माझेँ तर, त्यो पापीले मेरी ‘हिरोनी’ जस्ती छोरीलाई यस्तो पारिदियो ।’
उनी निरन्तर बोलिरहेकी छिन् । गुनासो पोखिरहिन् । अस्पताल पुगेका आफन्तहरु सम्झाउँछन्, ‘ तपाई नै कमजोर हुनु भयो भने त छोरीको के हुन्छ । छोरीका लागि भए पनि सम्हालिनुपर्छ । सधैं रोएर हुन्छ ?’
आफन्तका आश्वासनले उनी निःशब्द हुन्छिन् । कुनै जवाफ छैन । त्यही बेला अस्पतालको बेडमा लम्परसार रहेको छोरीले केही संकेत गर्छिन् । उनको शरीर चलमलाउँछ । मुख बंगाएर केही आवाज निकाल्छिन् तर, संकेत बुझे पो !
‘ पानी खाने हो ?’ कमलाले नजिकै गएर सोध्छिन् ।छोरीले मुख बिगार्दै अर्को संकेत गर्छिन् । फेरि बुझ्न गाह्रो ! ‘खाना खाने हो ?’ सोध्छिन् । जवाफ फेरि पनि अस्पष्ट आउँछ । अनी उनी गुनासो गर्छिन्, ‘ हेर्नुस् त छोरीले बोलेको केही नबुझ्दा कस्तो भएको होला मलाई ? ६ दिनदेखि यस्तै भइरहेको छ । म अत्तिसकेँ ।’
कीर्तिपुर अस्पतालको कोठा नम्बर २४ मा जेनी खड्का लम्पसार परिरहेकी छिन् । जेठ १ गते एसिड आक्रमणमा परेकी उनको घाँटीभन्दा तल ब्याण्डेज गरिएको छ । हात र खुट्टामा पनि उस्तै ब्याण्डेज । अनुहार अलिक सुन्निएको छ । बोल्न सक्दिनन् । बडो कष्टसाथ केही भन्न खोज्छिन्, आमाले बुझ्दिनन् ।
कुरुवा बस्दाबस्दै कमला पनि बिरामी भइसकेकी छिन् । अस्पतालको बसार्इ अत्यास लागिसकेको छ उनलाई । ‘मलाई मात्रै किन यस्तो होला’ भन्दै गुनासो गर्छिन् । भेट्न आउनेहरूलाई आफ्नो कथा व्यथा सुनाएर हलुका हुने कोशिस गर्छिन् । तर, अस्पतालले दिएको औषधिको बिल र ‘टुकटुके फोन’मा बजेको घन्टीले बेलाबेला तनाव दिइरहन्छ । अनि बोल्दाबोल्दै बरबरी आँशु झार्छिन् । सहनै नसक्ने भएपछि डाँको छोडेर पनि रुन्छिन् । अस्पताल पुगेका आफन्तहरुलाई समेत उनलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्छ ।
७ दिन अघि…
कमलाको श्रीमान तीन वर्षअघि बितिसके । तीन छोरीको उनीमात्रै सहारा । अरूको घरमा काम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेकी थिइन् । घटना भएको दिन बालुवाटारको एक घरमा एक महिनाको लागि अनुबन्धन भइसकेकी थिइन् । काम थियो- सुत्केरी स्याहार्ने ।
त्यसदिन उनले सुत्केरीलाई तेल लगाइदिइसकेकी थिइन् । कपडा धुने काम पनि सकियो । सरसफाईको काम सकाएर बस्न नपाउँदै छोरीको याद आयो । अनि जेनीलाई फोन गरिन् । सञ्चो बिसन्चो सोधिन् । आमाछोरीको केही मिनेट गफ भयो । कुरा गर्दा गर्दै ‘ब्याट्री लो’ भएर कमलाको फोन अफ भयो । उनले मोबाइलबाट ब्याट्री झिकेर चार्जमा हालिन् । ब्याट्री नझिकी मोबाइलमा चार्ज गर्न नमिल्ने ! त्यही बेला बच्चा रोएको आवाज आयो । गएर बच्चालाई फकाउँदै ‘डाइपर’ फेरिदिइन् ।
त्यसपछि घरबेटीको ल्याण्ड लाइनमा फोन आयो । घरबेटीले फोन उठाएर उनलाई दिए । उताबाट आवाज आयो- ‘तपाईको छोरीलाई ओम अस्पताल ल्याएको छ, तुरुन्त आउनू ।’
उनी अकमक्किइन् । १० मिनेट अघि राम्रोसँग कुरा गरिरहेकी छोरी अकस्मात अस्पताल ! उनलाई विस्वास नै लागेन । केही भन्न नपाउँदै फेरि उताबाट आवाज आयो- ‘छिट्टै अस्पताल पुग्नु अर्जेन्ट छ ।’
उनले केही सोध्नुअघि नै फोन काटियो । हत्तपत्त चार्जमा राखेको ब्याट्री झिकेर मोबाइलमा हालिन् । मोबाइल खुलेको केही क्षणमै फेरि फोन आयो । उठाउँदा आवाज आयो- ‘तुरुन्त अस्पताल पुग्नुस्, तपाईँकी छोरी ओम अस्पतालको इमर्जेन्सीमा छ ।’
प्रहरीले फोन गरेको रहेछ । त्यसपछि विश्वास गर्न कर लाग्यो । सोचिन्, ‘ चटपटे खान सडकतिर निस्किकी थिइहोली, बाइकले हान्दियो होला.. ।’
अस्पताल पुग्दा अनुमान फेल खायो । छोरीलाई देखेर स्तब्ध भइन् । रिंगटा लागेर टाउको फनफनी घुम्यो । के गर्ने कसो गर्ने केही सोच्नै सकिनन् । एसिडको रापले जेनी छटपटाइरहेकी थिइन् । मुख पनि बांगिएको थियो । अनुहारमा दाग त देखिएन तर, घाँटीभन्दा तल हेरिनसक्नु, पुरै विभत्स !
ओमले कीर्तिपुर अस्पताल ‘रिफर’ गरिदियो । अस्पताल पुर्‍याउनासाथ तीन घण्टा चिसो पानीले कुलिङ गरे । त्यस दिनदेखि जेनी अस्पतालको शैयामा छिन् । आइतबारबाट मात्र केही संकेत गर्न थालेकी उनी होश आउनासाथ बरबराउँछिन् । सोमबार हामी पुग्दा पनि त्यस्तै थियो । कमलाले त्यही बेला सोधिन्, ‘छोरी तँलाई कसरी हान्यो एसिड ?’
जेनीले आमालाई केही कुरा सुनाइन । उनले भनेको बुझ्न हम्मेहम्मे परिरहेको थियो । केही कुरा सुनेपछि कमलाले सुनाइन्, ‘त्यो दिन उ ( कृष्ण भुजेल) घरमा आएर ढोका ढकढक्यायो । ढोका नखोले भाँडभैलो गर्थ्यो । छिमेकमा हल्ला हुन्थ्यो । त्यही भएर म निस्किएँ । निस्किएको केही क्षणपछि उस्ले केही छ्याप्यो, त्यसपछि केही थाहा पाइनँ । भतभती पोल्यो ।’
छोरीको कुरा सुनाउँदा सुनाउँदै उनका गह भरिइसकेका थिए । केहीक्षण सन्नाटा छायो । उनले एक तमासाले लम्पसार परिरहेकी जेनीलाई हेरिरहिन् । त्यही बेला टुकटुके फोनमा बजेको रिंगटोनले ध्यान भंग गर्‍यो ।
फोन उठाएर केही क्षण सुनेपछि जवाफ फर्काइन्, ‘ म त पागल हुन लागिसके । अस्पताल त महंगो रै’छ । दुई दिनको औषधिको मात्रै एक लाखको बिल आइसक्यो । अपरेसन गरेको कति हो । कसरी पो तिर्नु ? टिचिङतिर लैजानु पर्छ कि क्या हो ?’
फोनमा कुरा गरेर बिदा मागेपछि कमला थचक्क भुईँमा बसिन् । एक बोतल पानी एक सासमा रित्याएपछि भनिन्, ‘ जिन्दगीमा दु:खले कहिल्यै नछोड्ने भो । अब त पागल हुनमात्र बाँकी छ ।’
कमलाको श्रीमान पहिलेदेखि मुटुको बिरामी । कमाई राम्रो थिएन । पेट पाल्न धौधौ परेपछि उनले जेनीलाई बाल वातावरण केन्द्रमा भर्ना गरिदिइन् । १२ वर्षीया जेनीलाई बाल वातावरण केन्द्रले निःशुल्क लालन पालन गर्यो । तर, २ वर्षमै केन्द्रबाट निस्किइन् र केही समयपछि कृष्णसँग भागिन् ।
जेनी १५ वर्षको हुदाँ कृष्ण ३२ वर्षका थिए । नाबालक छोरी भगाएको भन्दै कमलाले प्रहरीमा उजुरी हालिन् । त्यसपछि थाहा भयो- जेनी कृष्णको तेस्रो श्रीमती भएर गएकी रहिछन् ।
कृष्णकी जेठी श्रीमती प्रहरी चौकीमा आएर कमलालाई थर्काइन्, ‘यति सानी छोरीलाई दोब्बर उमेरको केटासँग पठाउन लाज लाग्दैन् ?’
कमलाले यो कुराको सुइको पाएको थिइनन् । भन्छिन्, ‘ कलिलो उमेर फकायो होला, धम्क्यायो होला गई । मलाई अलिकति थाहा भएको भए म रोक्थे । थाहा नपाउँदा ऐले यस्तो भयो ।’
१५ वर्षमै भागेकी जेनीसँग कमलाको २ वर्षपछि मात्र सम्पर्क भयो । त्यसअघि कुनै अत्तोपत्तो थिएन् । जेनी कृष्णसँग ओखलढुंगा गएर बसेको भने सुनेकी थिइन् । छोरीको न्यास्रो लागे पनि सोधिखोजी नगरी चुप बसिन् । कामको बाध्यता एकातिर थियो भने छोरीले सम्पर्क नगेरेको झोक अर्कोतिर ।
‘बाउ आमाको मुखमा …. गएकीलाई माइती टेक्न दिन्न्’ कमलाको मनमा यस्तै आक्रोश आउथ्यो । तर, माया मार्न पनि सकिनन् । छोरी फर्केर आइदिओस् जस्तो लाग्थ्यो ।
नभन्दै कृष्णसँग भागेको २ वर्षपछि जेनी काठमाडौं आइन् । त्यतिन्जेल उनको कृष्णसँग सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो । त्यसपछि उनीहरु छुट्टिएर बस्न थाले । केही समय एक्लै बसेकी जेनी विगत ५ महिनादेखि आमासँग बस्न थालिन् । असनको जनमत सहकारीमा ‘पैसा कलेक्सन’ गर्ने काम गरिरहेकी थिइन् ।
यसरी नै जिन्दगी चलिरहेको थियो । खुसी नभएपनि उनी दुःखी पनि थिइनन् । तर, जेठ १ गतेको घटनाले जिन्दगीको लय बिगारिदियो । जेनीको जिन्दगी त तहसनहस भयो नै । कमलाले पनि चोट भोगिन् । अरुको घरमा मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकी कमलालाई चिन्तामाथि चिन्ता थपियो ।
छोरीको चिन्ता । अस्पताल खर्चको चिन्ता । अनि पेट पाल्ने काम रोकिएको चिन्ता । अनि अर्को ठुलो चिन्ता त छँदैछ— छोरीको अपराधीले सजाय पाउने हो कि उम्किने हो ?
सुस्केरा हाल्दै आक्रोश पोख्छिन्, ‘ म सम्पन्न परिवारको भइदिएको भए त्यो अपराधीलाई आफैं सजाय दिन्थेँ । तर, के गर्नु यहाँको दौडधुपले दिमाग खराब भइसक्यो ।
बोली नसक्दै कमला छोरी जेनीलाई सुमसुम्याउन थालिन् । आमा छोरीको मौन संवाद चलिरह्यो ।अनलाईनखबरबाट सभार
वैशाख २७, सिन्धुपाल्चोक । भूकम्प र भोटेकोशीको बाढीपछि तहस-नहस भएको नेपाल-चीन सीमा नाका तातोपानी क्षेत्रको लार्चा नजिकै पक्की मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । पुल तर्ना साथ एउटा विशाल र भव्य भवन देखिन्छ । भवनभित्र छिर्दैगर्दा कुनै विकसित देशको सपिङ सेन्टरभन्दा कुनै हिसाबले कमी देखिँदैन । भवनभित्र सुन्दर बगैंचा, पानीको फोहोरा, पार्किङलगायत सबै सबै सुविधासम्पन्न […]
दुई लाख राशीको नेपाल विद्यापति पुरस्कार चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई
Posted on November 10, 2019 Author Jaljala Online
कात्तिक २४, जनकपुरधाम । नेपाल सरकारद्वारा स्थापित मैथिली भाषाको सबैभन्दा ठूलो राशीको विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार यस वर्ष साहित्यकार चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई दिइने भएको छ। नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी आइतबार दुई लाख राशीको उक्त पुरस्कार धनुषा रघुनाथपुरका उपाध्यायलाई सुदामा चरित्र नामक मैथिली खण्डकाव्यका लागि प्रदान गरिने जानकारी दिएको छ। यसैगरी नेपाल विद्यापति […]
ज्वाइँ झुण्डिएको स्थान नजिकै यस्तो भेटियपछी……
अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले साढे २८ हजार कर्मचारीको तलब गुम्यो